Kuedzwa kwaJesu — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
kuvaKristu, mubvunzo harisi kana kwete ticharamba nemiedzo, asi sei isu achapindura patinoita. In Luke 4:1-2, tinoverenga nezve muedzo kwaJesu uye sei Akapindura. Heinoi ekuteerera kubva pfupi mharidzo Ndaiparidza nezvemuvaravara kuti chechi yangu mwedzi mishoma shure. Ndaida kutarisa muedzo kwaJesu, fungisisa kuteerera kwake, uye funga kuti chii chatingadzidza pane chiitiko ichi. Ndezvipi zvinhu zvatinofanira kuyeuka munguva dzokuedzwa? Hedzinoi pfungwa huru:
ini. Mwari Inokutendera uye Anoshandisa Muedzo sezvo Chikamu Plan Rake
II. Kuneta hakusi Zvikodzere kuti nemuedzo
III. Muedzi kare akakundwa
Kuedzwa kwaJesu BragOnMyLord
Ndinonamata kuti kukurudzira kwamuri
N-chena • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:13 ndiri • pindura
James 1:13, “Ngapasave neanotaura kana achiidzwa, “Ndiri kuyedzwa naMwari”; nekuti Mwari haangaidzi nezvakaipa, uye Iye amene haaidzi munhu.”
Anoshamisa_nwadiei • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:13 ndiri • pindura
Izvi ndizvo chaizvo zvandaiuya pano kuti nditaure. Mwari haashandise muyedzo, asi achatinunura kubva pazviri kana tikakumbira.
kusazivikanwa • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:14 ndiri • pindura
Akanyatsojekesa kuti haasi munzira achiti ndiMwari vanotiedza asi ndiSatani, nyika, uye nyama yedu. Mweya wa Mwari wakatungamira Jesu kuti aedzwe nekuda kwechimwe chikonzero. Mwari anoshandisa muedzo wese, kukunda miedzo, uye uye kunyange zvivi zvatinoita kuitira kubwinya kwake.
BPro_12 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:15 ndiri • pindura
@ N-tahir @Ebube_nwadiei Nditeerereiwo kune iyo mharidzo yese zvakare. Kufamba hakusi kuti Mwari vanoedza isu. Anenge achingoti Mwari vanozvibvumira. Mwari anozvitendera kuitira kuti tigone kutsungirira kubudikidza nazvo nekuvimba naye. Kana tikasarudza kuisa pasi zvido zvedu zvoudyire pamberi paMwari uye nokuzviisa kune kwake, mhedzisiro ichave iri hukama huri nani naye, izvo pakupedzisira ndizvo zvaari kuda nesu. Nei zvimwe aizo tumira chinhu chakanyanya kukosha kwaari, Mwanakomana wake chaiye, kufira pamuchinjiko kwechimwe chinhu chaasina kuita?
Nathaniel Babalola • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:15 ndiri • pindura
chaizvoizvo. Asi Mwari vanoidza isu, sezvaakaita kuna Abhurahama. Abrahama haana kuedzwa asi akaedzwa